तयारीमा–एसियाली फुटबल महासंघअन्तर्गत एएफसी यू–२३ च्याम्पियनसिपको छनोट चरणको तयारीमा रहेको नेपाली यू–२३ राष्ट्रिय फुटबल टोलीले आज बंगलादेशको टोलीसँग खेल्दै छ। सोमबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली टोलीका प्रशिक्षक राजुकाजी शाक्यले मंगलबार
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई मंगलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा विदाई गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा । उपराष्ट्रपति पुन २३ औं चीन—लान्जाउ लगानी तथा व्यापार मेलामा सहभागी हुन मंगलबार चीन भ्रमणमा निस्कनु भएको हो
ख्यातिप्राप्त हास्यव्यंग्य अभिनेता हरिवंश आचार्य सोमबार छोराहरु त्रिलोक र मोहितको बिबाह प्रीतिभोजमा। हरिवंशले सोमबार छोराहरु त्रिलोक र मोहितको बिबाह प्रीति भोज दिएका हुन्। जहाँ उनका साथमा पत्नी रमिलाले पाहुनाको स्वागत
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा सोमबार नयाँदिल्लीमा भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग भेटघाट गर्दै ।
राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा बिहीबार भक्तपुरमा रोपाइँसँगै रमाइलो गर्दै रोपाहारहरू । तस्वीरः रवि महर्जन⁄काठमाडौं
एसियाली फुटबल महासंघअन्तर्गतको एएफसी यू–२३ एसियन कप छनोटमा सहभागी हुने नेपालको यू–२३ फुटबल टोलीको प्रशिक्षकमा राजुकाजी शाक्य नियुक्त भएका छन्। आगामी जुलाई १९ देखि २४ सम्म यूएईको अल अइनमा हुने
तेस्रो विश्व योग दिवस-योग अभ्यास गरिँदै
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को हालै भएको परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरू कक्षा ११ मा भर्नाका लागि अहिले दौडधूपमा रहेका छन् । राजधानीको एउटा कलेजमा मंगलबार भर्ना फर्म बुझाउनका लागि लामबद्ध विद्यार्थीहरू ।
स्वीजरल्यान्डको जेनेभा भ्रमणबाट आइतबार स्वदेश फर्कनुभएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा । तस्वीर सौजन्यः प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
स्विजल्यान्डको जेनेभामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को १०६औं सम्मेलनलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । पछिल्ला वर्षहरूमा महिलाहरूको श्रम पहुँच बढे पनि समाज र कार्यस्थलमा हुने विभेद यथावत
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपाल
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा राजधानीमा आयोजित सार्क फाइनान्स सेमिनारको बिहीबार उद्घाटन गर्नु हँुदै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपाल। तस्वीरः उजोल डंगोल⁄नेस
१० औं गणतन्त्र दिवस
गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा सोमबार आयोजित विशेष समारोहमा विभीद कार्यक्रम र कला प्रस्तुत गर्दै । तस्बिर : रासस
कामपा वडा नं. २० का वडा अध्यक्ष राजेन्द्र मानन्धरसहित नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई शनिबार मरू त्वाः पुचःले गरेको सम्मान । तस्वीरः नेस
ललितपुरस्थित जावलाखेलमा रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो राष्ट्रपतिलाई देखाउँदै गुठी संस्थानका कर्मचारी । तस्वीरः उजोल डंगोल⁄काठमाडौं
काभ्रेको मण्डनदेउपुर १२ ज्याम्दीमा भेटिएको गुफा हेर्न ओडारमा पुगेका स्थानियहरु । यहाँ २ वर्ष अघि गुफा र शिव मुर्ति भेटिएको थियो । सो स्थानमा पुनः अर्को गुफा भेटिएपछि अहिले हेर्न
बजार लैजाने तयारी
मण्डनदेउपुर नगरपालिका १०, चण्डेनीमण्डनका कृषक सुन्दर नेपाल काँक्रा टिपेर बजार लैजाने तयारी गर्दै । पछिल्ला वर्षहरुमा यहाँ बेमौसमी काँक्रा खेती फस्टाएको छ । तस्विर – ज्ञानमणि नेपाल
सो स्थानको मतदान नै स्थगित भएको छ ।
स्थानीय निर्वाचनको मौन समयको अन्तिम दिन शनिबार राति नमोबुद्ध नगरपालिकामा भएको गोलीकाण्डमा एक युवकको मृत्यु भएपछि आक्रोशित स्थानीय जनता । सो स्थानको मतदान नै स्थगित भएको छ । तस्वीरः
यातायातका साधनमा प्रतिबन्ध लागाउँदा उपत्यकाका सडक सुनसान
निर्वाचनका लागि यातायातका साधनमा प्रतिबन्ध लागाउँदा उपत्यकाका सडक सुनसान बनेका छन । फोटो:समीप श्रेष्ठ
आज हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनका लागि ललितपुरको मंगलबजारमा मतदान गर्न तयारी अवस्थाको बुथ । तस्वीरः रवि महर्जन⁄काठमाडौं
बुद्धजयन्तीको अवसरमा ललितपुरमा बुद्धको मूर्तिलाई खटमा राखी नगर पारिक्रमा गर्दै । तस्वीरः उजोल डगोल⁄कठामाडौं